DeepMind AI afaka maminavina tsara ny toetrandro. Meteorolojia amin'ny tambajotra
DeepMind AI afaka maminavina tsara ny toetrandro
Portillo Alemanina | | mialoha
Meteorolojia amin'ny maha siansa azy dia mandroso noho ny fivoaran'ny teknolojia. Amin'izao fotoana izao dia misy programa informatika maromaro afaka maminavina mivantana ny ora sy ny orana. Ny orinasan'i Deepmind dia namorona faharanitan-tsaina artifisialy afaka maminavina saika marina ny ora sy ny orana. Ity orinasa ity dia niara-niasa tamin'ny meteorologists UK mba hamoronana maodely izay tsara kokoa amin'ny fanaovana vinavinan'ny fotoana fohy noho ny rafitra ankehitriny.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny kitapo Robleda, ny teknolojia faminaniana momba ny toetr'andro an'ny orinasa DeepMind.
1 Toetran'ny toetr'andro
2 Fivoarana DeepMind
3 Fanandramana DeepMind AI
4 Fandrosoana amin'ny vinavinan'ny toetr'andro
DeepMind, orinasa mpitsikilo artifisialy any London, manohy ny asany amin'ny fampiharana ny fianarana lalina amin'ny olana siansa sarotra. DeepMind dia namolavola fitaovana fianarana lalina antsoina hoe DGMR amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Office of the British National Weather Service's Met Office, izay afaka maminavina tsara ny mety hisian'ny orana ao anatin'ny 90 minitra manaraka. Iray amin'ireo fanamby sarotra indrindra amin'ny faminavinana ny toetr'andro.
Raha ampitahaina amin'ireo fitaovana efa misy dia manam-pahaizana am-polony maro no mino fa ny finanin'i DGMR no faran'izay tsara amin'ny lafin-javatra maro, ao anatin'izany ny faminaniany ny toerana, ny elanelam-potoana, ny fivezivezena ary ny haavon'ny orana, 89% amin'ny fotoana. Ny fitaovana vaovaon'i DeepMind dia manokatra lakile vaovao amin'ny biolojia izay ezahan'ny mpahay siansa hamaha nandritra ny am-polony taona maro.
Na izany aza, na dia ny fanatsarana kely aza ny vinavina dia zava-dehibe. Ny oram-baratra mialoha ny orana, indrindra ny oram-be, dia zava-dehibe amin'ny indostria maro, manomboka amin'ny hetsika ivelany ka hatramin'ny serivisy fiaramanidina sy ny vonjy taitra. Fa sarotra ny manao azy tsara. Ny famaritana hoe ohatrinona ny rano any an-danitra ary rahoviana sy rahoviana no hilatsaka dia miankina amin'ny fizotran'ny toetr'andro maro, toy ny fiovan'ny mari-pana, ny fananganana rahona ary ny rivotra. Ireo anton-javatra rehetra ireo dia sarotra amin'ny tenany ihany, saingy sarotra kokoa rehefa atambatra.
Ny teknolojia faminaniana tsara indrindra misy dia mampiasa simika solosaina amin'ny fizika atmosfera. Izy ireo dia mety amin'ny vinavinan'ny toetr'andro maharitra, saingy tsy dia mahay maminavina izay hitranga amin'ny ora manaraka izy ireo. Io dia antsoina hoe vinavina eo ho eo.
Ny teknika fandalinana lalina teo aloha dia novolavolaina, fa ireo teknika ireo matetika dia miasa tsara amin'ny lafiny iray, toy ny faminavinana ny toerana misy azy, ary amin'ny fandaniam-bola hafa, toy ny hery maminavina. Ny data Radar ho an'ny oram-be dia be izay manampy amin'ny faminavina ny orana eo noho eo dia mbola fanamby lehibe ho an'ireo mpamantatra toetrandro.
Ny ekipan'ny DeepMind dia nampiasa angon-drakitra radar hampiofanana ny AI azy ireo. Firenena sy faritra maro no matetika mamoaka saripika fandrefesana radara izay manara-maso ny fananganana rahona sy ny fihetsiketsehana mandritra ny andro. Ohatra, any Angletera dia misy famakiana vaovao apetraka isaky ny dimy minitra. Amin'ny fampiarahana ireto fakana sary ireto dia afaka mahazo horonan-tsary mihetsika farany mampiseho ny fiovan'ny toetran'ny orana amin'ny firenena iray ianao.
Ireo mpikaroka dia mandefa ity angon-drakitra ity amin'ny tambajotram-panazavana lalina mitovy amin'ny GAN, izay AI voaofana izay afaka mamokatra santionany data vaovao izay tena mitovy amin'ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny fiofanana. Nampiasaina ny GAN hiteraka tarehy sandoka, ao anatin'izany ny Rembrandt sandoka. Amin'ity tranga ity, DGMR (izay midika hoe "Generative Deep Rain Model") dia nianatra namorona snapshot radar diso izay manohy ny filaharana fandrefesana.
Fanandramana DeepMind AI
Shakir Mohamed, izay nitarika ny fikarohana tao amin'ny DeepMind, dia nilaza fa io dia mitovy amin'ny fijerena sary vitsivitsy avy amin'ny sarimihetsika ary maminavina izay hitranga manaraka. Mba hitsapana io fomba io dia nangataka ny mpamantatra toetrandro miisa 56 avy amin'ny Bureau of Meteorology (izay tsy tafiditra amin'ilay asa) ny ekipa mba handinika ireo simika ara-batana mandroso sy andiana mpanohitra.
89% ny olona nilaza fa aleony ny valiny nomen'ny DGMR. Ny algorithman amin'ny fianarana milina amin'ny ankapobeny dia manandrana manatsara kokoa amin'ny refy tsotra amin'ny hatsaran'ny vinavinanao. Na izany aza, ny toetr'andro dia manana lafiny maro samihafa. Angamba ny faminaniana iray nahazo ny hamafin'ny orana amin'ny toerana mety, na ny faminaniana hafa dia nahazo ny fitambaran'ny fahamafisana fa amin'ny toerana tsy mety, sns.
DeepMind dia nilaza fa hamoaka ny firafitry ny proteinina rehetra fantatra amin'ny siansa. Ny orinasa dia nampiasa ny volavolan-tsolika alfaola natetika nanamboatra firafitra ho an'ny olombelona proteome, ary koa ho an'ny masirasira, lalitra voankazo ary totozy.
Ny fiaraha-miasa eo amin'ny DeepMind sy Met Office dia ohatra tsara amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa farany hamita ny fampandrosoana AI. Mazava ho azy fa hevitra tsara io, saingy matetika tsy mitranga izany. Ny ekipa dia niasa tamin'ny tetikasa nandritra ny taona maro ary ny hevitry ny manam-pahaizana avy amin'ny Bureau of Meteorology dia namolavola ny tetikasa. Suman Ravuri, mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny DeepMind, dia nilaza hoe: "Mampiroborobo ny fivoaran'ny maodelintsika amin'ny fomba hafa noho ny fampiharana azy manokana io." "Raha tsy izany dia afaka namorona maodely tsy tena ilaina amin'ny farany isika."
DeepMind koa dia maniry ny hampiseho fa ny AI dia manana fampiharana azo ampiharina. Ho an'i Shakir, DGMR ary AlphaFold dia ao anatin'ny tantara iray ihany: ny orinasa dia mampiasa ny taona niainany namahana piozila. Angamba ny fehin-kevitra lehibe indrindra eto dia ny DeepMind nanomboka nanoratra lisitra olana ara-tsiansa tena izy.
Fandrosoana amin'ny vinavinan'ny toetr'andro
Ny vinavinan'ny toetr'andro dia tsy maintsy tohanana amin'ny fampivoarana ny teknolojia satria manakaiky sy manakaiky kokoa amin'ny fahatakarana tanteraka ny fomba fiasan'ny atmosfera isika. Imbetsaka ny olombelona sy ny kajikajiny dia mety iharan'ny lesoka mahazatra azo sorohina amin'ny fivoaran'ny faharanitan-tsaina.
Ny vinavinan'ny toetrandro dia lakilen'ny olombelona satria afaka manararaotra betsaka isika loharanon-drano mahomby kokoa ary hialana amin'ny loza sasany amin'ny oram-baratra sy oram-be. Noho io antony io dia manaiky hatrany ny mpamantatra ny toetrandro hamolavola tetikasan-tsolika artifisialy amin'ny faminavina mialoha ny rotsakorana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tetikasa DeepMind sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Meteorolojia amin'ny tambajotra » mialoha » DeepMind AI afaka maminavina tsara ny toetrandro
Toetran'ny loka Nobel 2021
Inona ny rivotra mifehy ny varotra